single lever yekugezera pombi yakagezwa nickel
musha / Mabheji ekugezera / Imwechete Yakabata Bathroom Faucets / WOWOW Bathroom Mudziyo Mabhomba Akakwesha Nickel
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 18 kasitoma ratings
(18 kasitoma wongororo)
Iko kuunganidza faucet kunounza iwe isingagadzirisike masaiti anofungidzirwazve mune nyowani nzira nyowani dzakasiyana yebasa matunhu ebhavhu. Tenga madziro akaiswa pamadziro emba yekugezera mune akawanda akasiyana mapedhi.
2321501 mirairo yekuisa
Bathroom faucet imwe kubata 2321501
Iyi yekugezesa pombi chete mubato unopa kukwidziridzwa kusimudzira kune yako yekugezera. Yakanga yakanyatsogadzirwa nehunyanzvi, uye zvakadaro iine hunyengeri kumonyoroka. Iyo yakasarudzika pombi yekugezera imwechete mubato weWOWOW yaive yakagadzirirwa nekatatu-curve, pamwe chete neyechinyakare yakashongedzwa nickel kupera. Kwete pasina chinhu iyi yekugezesa pombi imwechete mubati weziso mune chero yekugezera, uye zvechokwadi ichave imwe yeakanyanya kunaka echako nyowani yekushongedza.
Kutsvagurudza kwakaratidza kuti mapombi ekugezera ndiwo makuru ekutanga munzvimbo yekugezera. Izvi zvinoreva kuti kutarisisa kwemunhu chero upi zvake kunokwezverwa pamapombi ekugezera. Kazhinji pombi yekugezera ndeimwe yezvinhu zvidiki mune yako yekushongedza yekushongedza. Uye zvakadaro ivo vane simba rakakura pamaonero ehukuru hwayo. Zvirokwazvo, iwe unogona kuwedzera kubata kwekunaka kune chero yekugezera ine yekugezesa pombi imwechete mubato weWOWOW. Vagadziri veWOWOW vakanyatsonzwisisa zvinoitika pamapombi ekugezera, uye nekudaro vanogadzira mapombi ekugezera anogona kuita mutsauko mune chero shongedzo.
Dhizaini yokugezera faucet mubato mumwe
Iwe unoda imba yekugezera yako ive yakanaka uye inoshanda panguva imwe chete. Nekuda kweizvozvo, iwe unofanirwa kusarudza kuti ndeupi rudzi rwekugezera faucet yauchasarudza. Sezvo paine mhando dzinoverengeka dzemagetsi ekugezesa faipi, iwe unofanirwa kutanga watarisa pane iripo nzvimbo yauinayo, uye zvaunofarira maererano nekushisa kwemvura mvura. Iwe unofarira kudzora tembiricha yemvura uye vhoriyamu nema 2 handles kana kungoita ne one? Paunosarudza mubato mumwe chete, ipapo imba yekugezera imwechete yeWOWOW inogona kunge iri yakanaka yekugezera faucet yauri kutsvaga!
Iyi yokugezera faucet mubato mumwe wakagadzirwa kubva kune ese ari maviri ane chimiro uye anoshanda maonero. Iyo imwe yakakomberedzwa mubato inowanikwa zvakanaka padivi peimba yekugezera. Wowow yekugezera faucet imwechete inobata inoshanda mushe. Vhoriyamu yemvura uye tembiricha inogona kunyatso kudzorwa kamwe chete. Chibatiso chimwe chete pasina mubvunzo chiri nyore kubata uye kushanda. Iwe unogona kungoita mashandiro emubato weimba yekugezesa nerumwe ruoko nekukwevera kure. Nenzira iyi kuyerera kwemvura kunochinjika kunoitwa. Nekutenderera chigaro chimwe chete unogona kuwedzera tembiricha yemvura nyore uye mushe. Iyo US-patents yakapetwa katatu-curve kuchaira zvirokwazvo yakasarudzika. Izvi zvinoita kuti imba yako yekugezera ive yakanyanya kukwira-kuguma, apo uchibatsirwa nekusevenzesa kwese kwaunokupa.
Yepamusoro-yemhando yekugezesa faucet mubato mumwe
WOWOW yekugezera pombi yemubato imwechete inogadzirwa neyakawanda ndarira uye yayo brushed nickel kupera yaive yakapwanywa ruoko uye kugadzirwa. Nekupedzisa kwayo, WOWOW inoshandisa mamiriro-e-iyo-hunyanzvi-tekinoroji kuti ipe yakanyanya kunaka mhando nekusimba. Nekuti iyo yekugezesa pombi imwechete mubato weWOWOW unogadzirwa neyakaomarara yendarira, iyi nyowani yekugezera pombi inopa zvakare yakanakisa kuramba mwando uye nekudaro ngura. Kwete zvechimwe chinhu, WOWOW inopa 3-gore garandi nguva yayo yekugezera pombi chete mubato. Humbowo hwekuti WOWOW inotenda muhunhu hwechigadzirwa chacho uye inotora mutoro wekuita kwayo kwegore rose.
Sezvo dhizaini yokugezera iyi faucet mubato mumwe wakasarudzika uye une mvumo, zvakare zvimwe zvemabasa ayo akasiyana. Iyo inogara yakasimba yekuchengetedza mvura aerator semuenzaniso. Iyo yepamusoro inoshanda Neoperl Aerator yeiyi yekugezera faucet imwechete inobata ine zvinyoro uye zvakatsiga mvura inoyerera kutonga. Naizvozvo hauchazonzwa chero mvura ichipararira. Kunze kweiyo inochengetedza kusvika pa50% mukushandiswa kwemvura. Izvi iwe zvechokwadi unozoona pane yako mvura dhiri. Iyo aerator inogona kubviswa nyore nyore ne (inosanganisira) aerator chishandiso. Nenzira iyi iwe unogona nyore kuishambidza izvozvi uye ipapo, kuitira kuti iwe uve nechokwadi chekuita kwakanyanya kunaka kwemakore.
Easy-inochengeterwa yekugezera faucet imwe mubato
Chekutanga pane zvese, iyo yakaomeswa nickel yekupedzisira inopa kubata kwakanaka kune chero yekugezera. Kunze kwezvo, iyo yepamusoro-soro yekupedzisa zvakare inopesana nemvura nzvimbo, kupera uye zvigunwe. Naizvozvo zviri nyore kuchengetedza uye kuchenesa. Unogona kungopukuta zvinyoro nyoro zvese zvakasara nejira rakanyungudika kuti imba yako yekugezera isabatwe kamwe chete ikapenya kunge nyowani zvakare. Kuchenesa imba yako yekugezesa faucet nguva zhinji zvakare kunovimbisa moyo murefu kutsungirira. Nenzira iyi masara akaoma haana shanduko yekuomerera kune yako yokugezera faucet. Kunyanya, kusara senge choko kunogona kukanganisa imba yako yekugezesa, kana isina kucheneswa nguva dzose. WOWOW inoita kuti zvive nyore, kuitira kuti iwe unogona kuita izvi pasina kuedza.
Iyo zvedongo vharuvhu yemuchina wekugezera pombi imwechete inobata inokupa iwe ne100% isina-kushanda. Uye zvakadaro pasina kuidzora kutsetseka kuti ishande. Iyi yepamusoro ceramic katuriji yakaedzwa neinopfuura mazana mashanu emazana emvura macircuit. Uye zvakadaro WOWOW yekugezera pombi yega mubato waive uchishanda pamwe chete zvakapfava. Uye zvechokwadi ichiri kudonha-fizi uye isina kuburitsa. Fungidzira kuti pombi yekugezera ingangoshandiswa kwete anodarika zviuru gumi pagore. Izvi zvinoreva kuti nebhegi rekugezesa rimwechete reWOWOW watenga pombi yekugezera kweupenyu hwese. Iyi imwechete inobata pombi yekugezera saka inodarika ese maindasitiri zviyero!
Ita-it-pachako yokugezera faucet imwe mubato
Iyo yekugezera faucet imwe mubato ndeyakareruka kuzviisa iwe pachako. Iwe hauzodi chero anodhura pombi! Saka iwe unogona zvakare kuchengetedza pamitengo yekuisa zvakanyanya. Iyi itira-yega pachako faucet inopihwa neiseti yakazara yezvinhu pamwe nekuisa zvishandiso. Izvi zvinosanganisira simbi dhiza dhiza, 20 inch Tucai hose yemvura ine yakasimbiswa mhando, kuisirwa magurovhosi, aerator kubvisa chishandiso, nezvimwe.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, WOWOW inonyanya kuvimba neiyo mhando yekushambidzika yayo yekushambidzira. Naizvozvo WOWOW inokupa yakanakira 3-gore waranti nguva. Kana imba yekugezera yako yekugezera imwe chete isingashande sezvazvinofanirwa, unopihwa brand new yekugezera faucet imwe mubato kuti udzore yako. Uye kunze kweizvozvo, WOWOW inopa 90-zuva rekudzoserwa mari vimbiso. Kana iwe usingazove kufadzwa ne kukosha kwemari WOWOW iri kukupa iwe, uchaita
wana mari yakazara zvakakwana pasina mubhadharo wakawedzerwa, uye pasina mibvunzo yakabvunzwa. Zvakareruka seizvozvo!
 Gadziriso yeUS-patentsetwe katatu-curve dhizaini
 Zvakasarudzika brashi nickel
 Yakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro
 Inonyaradza imwe-inobata lever
 Inochengetedza inosvika makumi mashanu muzana emvura neyakavhurika aerator
 Makore matatu-matatu waranti nguva
SKU: 2321501 Categories: Mabheji ekugezera, Imwechete Yakabata Bathroom Faucets Tags: 1 Kubata, 1 Horo, imba yekugezera
18 anodzokorora nokuti WOWOW Bathroom Vessel Faucets Bronze Nickel
Yakanaka kwazvo Faucet, Superve Hunhu uye esy Kuisirwa
Ichi chigadzirwa chaive nechitarisiko chakasarudzika mukuwedzera pakuva mubato mumwe chete, ndosaka ndakatenga. Ini ndagutsikana kwazvo nehunhu uye kupedzisa kwechigadzirwa uye ndinofara nekutenga kwangu.
Ini ndakatenga izvi kutsiva iripo 2-mubato, 3-gomba pombi mune yangu yekugezera. Kunyangwe gomba repakati pane zvisina maturo raive diki uye raida kucherwa kuti rigone pombi iyi nyowani, ndiro yemeso yakasanganiswa neiyi tepi yakavhara maburi matatu.
Bhegi iri rinoshandisa zvemhando yepamusoro, simbi dzanhasi dzisina simbi uye zvigadzirwa zvendarira. Iyo yepakati yakakodzera ine mhete yendarira yekuchengetedza iyo tepi kune isina maturo uye 2 screws kune ese mativi echindori kuona kuomarara. Izvi zvinoita kunge mapombi akanaka anoisa mazuva ano, ayo andinoonga nekupihwa kwakaoma kuwana torque yakakodzera munzvimbo dzakapinza pasina zvikwiriso zviviri.
Icho chidimbu chedrain hachinyatso kukwira chakazara mukati medhi rangu, asi ini ndinofarira icho iko kusundira-kuvhara-kuvhara mvura pane kuve nebhawa raunodhonza. Musiyano wedrey dema uye chena singi yakanaka. Vamwe vanhu vanogona kunetsekana kuti dhureni ipurasitiki, saka izvi zvakakodzera kucherechedza. Ini ndichafanirwa kuona kuti inomira sei nekufamba kwenguva.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ini ndakaita iyi mhando yekureruka pombi dzemvura munguva yakapfuura. Ndiri DIY'er anobatsira, asi ini handisi iye ane ruzivo pombi. Zvishandiso uye zvishandiso zvandaishandisa zvaisanganisira wrench, chiteshi kukiya, screwdriver, bhaketi, tauro, plumbers putty, teflon tepi, Rigid EZ Change faucet chishandiso (uye 1 1/2 ″ hole saw + drill kugadzirisa zvisina maturo).
Ini ndakanyatso fadzwa nepombi iyi. Yakavakwa zvakanaka, inorema, inotaridzika zvakanaka uye inoshanda kwazvo. Kuisirwa yaive mhepo, asi mitsara yekupa yaive shoma pfupi. Hapana kunetseka. Mugadziri akatopa tepi yeTeflon. Chinhu chega chandinoshuvira kuti dai ichi chaive nerumwe rudzi rwepurasitiki spacer pasi payo inokwidza ndiro kuti igone kusimbiswa zvishoma. Ndine chokwadi chekuti ndinogona kugadzira chimwe chinhu kumusoro. Zvese mune zvese, ichi chihombe chefaucet.
Sekutaura kwakaita vamwe, kusimbisa pombi ine tsika yekukotamisa ndiro. Mhinduro yangu kune izvi yaive yekushandisa o-mhete dzakatenderedza sleeve yakasungirirwa inoenda nemipombi. Iwo ma-mhete anofanira kunge akakura zvakakwana kuti akwanise kutenderedza ruoko irwo asi zvidiki zvakakwana kuti akwane nepadeketi. Ini ndakapakira mashoma eaya kuitira kuti kukwirira kwesiteki kwaive kureba zvishoma pane dhiketi yeplate kukwirira. Iwo ma-zvindori ane akawedzera bhonasi mune izvo zvinobatsira kuisa pakati pompombi uye dhiketi ndiro. Nenzira iyi, ndakakwanisa kuomesa pombi pasi kuitira kuti isafambe uye ndiro yacho isapfugame.
Ndiri kunyatsodanana nepombi iyi. Mitsara inoyevedza uye kupfava kunoshamisa. Yakagadzirwa zvakanaka, kwete yakachipa neimwe nzira. Zvikamu zvese zvinozivikanwa zviri nyore uye zvaive nyore kuisa. Ini handisi mupombi uye ndine ruzivo rwushoma, ndinongoda kuyedza zvinhu zvitsva uye ndanga ndichinyatsoisa izvi pamwe nekuzvishandisa mukati meawa.
Kuyerera kwacho kunenge kwemaminera uye kunogona kuburitsa tani yemvura kana iwe uchibvumira.
Ndiri kufara kwazvo kuva neiyi mubhati yedu yevaeni uye ndatogamuchira kurumbidzwa!
Kukosha kusingadaviriki. Ndakafananidza mamwe mapombi arikukanda ka2 kana katatu zvakapetwa uye havaenzanise. Chinhu ichi chakasimba chunk yesimbi! Kunzwa kwakachena mhando. Ini ndiri mukomana ane zera repakati asina murume. Ini handifanire kuwana ichi kufara nezve yekugezera chigadziro asi ini ndinochida!
Ini ndakaisa izvi mune yekare 60s yekugezera iyo ichine iyo yekutanga zvigadzirwa. Ini ndaifanira kuwedzera gomba repakati nekukuya kunze. Iniwo ndaifanira kuita zvakafanana kudhizaina. Ini handina kushandisa iyo drain inouya nayo, ndakatenga solid solid pop up basa. Izvi zvachinja imba yangu yekugezera uye ndokupa iro rekuwedzera kukwidziridzwa, kunyangwe kana kuri kungogeza maoko angu, izvo isu tese tanga tichiita zvakawanda munguva pfupi yapfuura.
Wowow pombi yakanyanyisa mhando uye dhizaini inoyevedza kwazvo pamutengo. Iyo yekupedzisira nickel ine yakanaka satin kutaridzika uye zviri nyore kuti urambe wakachena uye usina gwapa wakasununguka. Iyo yakapusa ruoko kudzora iri nyore uye intuitive kushandisa. Iyo inouya nekavha ndiro kana ichidikanwa kuti ishandure kubva pamaburi matatu kuenda kune rimwe, asi ini ndakarikwirisa rakananga ndisina ndiro pairi rimwe gomba pakaunda yepamusoro. Zvaive nyore kuisa, asi ziva kuti mitsara yekudyisa ingori tsoka imwe chete uye ungangoda yekuwedzera emvura mitsara yekuwedzera kuti uwane mavhavha ako ekuisa. Ichi chigadzirwa chakashongedzerwa uye chakakosha mutengo wemutengo.
Zvechokwadi zvinoshamisa! Plumber yedu yakabvunza kuti tombi yacho takaiwanepi nekuti yaive mhando yakanaka uye aida kuitora ega. Ndingakurudzira zvikuru. Pamusoro pazvo zvese, yakanaka kwazvo.
Ini ndagutsikana kwazvo nepombi! Dhizaini yacho yakapusa uye inoyevedza, izvo zvinoita kuti imba yangu yekugezera iratidzike! Mukana wakakura ndewekuti kumisikidza kuri nyore kwazvo! Kutaura chokwadi, ndinofunga zvinotora nguva kuiisa, asi rairo dzakajeka uye dzinonzwisisika. Ini ndizere nekurumbidzwa nekuonekwa kwepombi iyi. Ini ndaimbova nehombodo yeAmerican yekugezera kumusoro, asi haina kunyatsotaridzika. Ini ndinoda kutaridzika kwepombi iyi, uye ndinoda kurapwa kwepamusoro!
10 kubva pa10! Akatenga TATU uye anonyatsovada! Hwakanaka mhando uye mutengo kuba.
Bhegi racho rakakora kana kurema kupfuura zvandaizoda!
Ndinoda maitiro uye mashandiro anoita pombi, zvakanaka zvinhu. Zvakanakisa
Chekutanga pombi yekugezera yandakambotenga! Zvinoshamisa! Yakagadzirwa mushe uye yakasimba! Sleek uye yekumira musink yakanaka. Ini ndee Absolute love!
Ndine chiteshi chebvunzo chakagadzirirwa kuongorora mapombi.
Ini ndichaedza kuputsa zvinhu nepandinogona napo maererano nehunhu hwechigadzirwa uye kuomarara kwekuisirwa.
Pane chiyero che1-10, ini ndingati iyi pombi ndeye 7/10 kusvika padambudziko rekuisa.
Ramba uchifunga kuti zvinogona kusiyana nekunyura kwako uye kabhodhi kugadzirwa.
Iyi chaiyo pombi yakanaka mhando.
Iyo nhema nhema inotaridzika zvakanaka. Pakazara pombi iyi inoita kunge yakasimba. Ini ndinoda kuti kupera hakuzosvibiswa zvakanyanya nekuda kwekuonekwa kwematte. Izvo hazvidi kupukutwa pasi nguva nenguva se chrome kuchengetedza kupenya.
Mubato mumwe chete unoita kuti zvive nyore kusarudza tembiricha yemvura. Iyo yakavhenganiswa vharuvhu inoshanda kwazvo, sezvazvinofanira kuita.
Pombi iyi iri nyore kushandisa uye inofamba mushe mushe pasina nyaya.
Icho chokwadi chekuti iri 360 degree kutenderera inoenderana ndeyekuwedzera sezvo iwe uchigona kuiisa zvisinei zvaunoda uye icharamba ichifamba kwaunoda iwe. Zvakare inouya neplate dhiza. Unogona kuvhara iwo maburi asina kushandiswa mudhishi rako.
Iwe unokwanisa kukwevera pasi musoro, izvo zviri pachena kuwedzera pamwe chete. Multiple spray modes kwete senge mamwe anodhonzera pasi mapombi. Hwaro hwekunobuda musoro hwakagadzirwa mushe kuti usakanganisa pombi nekufamba kwenguva sezvaunoishandisa.
Dhizaini yakanaka pamwe nekukwana uye kupedzisa ita ino kana iri yakanaka faucets. Zvakaoma kutaurwa nemifananidzo asi pombi ine dhizaini yakasarudzika inosanganisira zvishoma kumonyoroka kune spout, ichiita kunge chidimbu chehunyanzvi. Inorema kuvaka yakasimba. Iyo yakagadzika mubato chaiyo inoshamisa zvakare. Yakananga kumberi Nyore kuisa kunyange inouya nemagurovhosi. Ini handikwanisi kudzokorora zvakakwana!
Kuisirwa kuri nyore nezvose zvishongedzo uye zvinopihwa, izvo zvinhu zvinoita kunge zvakavakwa zvakanaka uye hwakanaka mhando. Iyo yakapihwa pombi uye zvinongedzo zvakatsiva bhegi rangu rekare zvisina mhosva. Mvura inoyerera mushe uye inopindura mushe nekubata kumwechete uye ruzha rudiki uye hapana kuputika senge yangu tepi yekare Dhizaini yacho inoyevedza uye inoita kuti yangu yekugezera yekare itaridzike nyowani uye yazvino. Kukanganisa chete hakuzi kuuya neye pop-up drain fixture uye ndinofanira kumisikidza izvi nemaoko neyangu yekare ficha. Pakazara, mhando yakanaka uye kutaridzika zvakanaka uye inofanirwa kugara kwemakore mazhinji, ini ndichagadzirisa zvakare mune ramangwana kana paine nyaya inomuka.
Iyi ndiyo yakanaka kwazvo yekugezera pombi yandakaona. Iine maitiro akawanda uye inorema kwazvo. Yakanyatsogadzirwa uye inoshanda yakakura futi. Yakanga iri nyore kuisa. Ndingakurudzira izvi kune chero munhu anoda yakasimba, yemazuva ano pombi.
Ini ndakatenga izvi kuti ndiwedzere pombi yangu yekugezera iyo yaive ichifambidzana. Ini ndaishushikana nezvedambudziko rekuoma nekuisa pombi nyowani. Nekudaro, pasuru yacho yakauya nebhuku rekuti ungoriisa sei. Chikamu chakaomarara kwaive kuchichinjazve nemapombi angu aripo mubathroom yangu. Asi zvaive zvisina kunyanya kuipa kuti uzive. Kunyangwe nguva yekumisikidza ichangopfuura 1hr kwandiri zvandisati ndamboita chero pombi dzemvura kare. Ini ndainyanya kufara kuti yakauya neplat yema base sezvo pombi yangu yazvino yakanga iine maburi matatu akaboorwa kumusoro kwangu kwegranite saka ndakakwanisa kushandisa ndiro kufukidza maviri emakomba ayo pombi iyi yaisada. Zvakare kuve neyechipiri seti yemaoko kuchabatsira zvakanyanya kunyangwe ini ndakaiisa ndega asi izvo zvakawedzera iyo nhanho yakaoma.
Zvese zvandaishandisa yaive 11mm wrentch yekukochekera hosipaipi yepombi kuimba yangu pombi dzemvura (inopisa uye inotonhorera mutsetse), chinotyaira mutyairi wekusungira bhegi kune granite pazasi uye kiringi yekuchinja drain cap
Pasuru yacho yakauya nemagurovhosi kuitira kudzivirira zvigunwe zveminwe pazvose asi ini handina kuishandisa.
Parizvino, ndanga ndichiishandisa uye yega yega mumba inofarira nzira iyo pombi nyowani inotaridzika. Ini ndichave ndichitenga mamwe mapombi kubva muchitoro ichi apo ini ndinotarisa kusimudzira mamwe mapombi ari pamba.
Inotaridzika zvakanaka. Yakakura hombe yekugezera diki. Mamita ekuravira.
Yakanyanya kunaka kukwidziridza yangu yekugezera singi. Hunhu hwakanaka.